Daawo Mu’asasada Al-malaaxim Oo Soo Saartay Filim Cajiib Ah. – Bogga Calamada.com
January 18, 2018 5:17 am Views: 2100
Mu’asasada Al-malaaxim ee garabka Warbaahineed ee Mujaahidinta Alqaacidah ee dhulka Jaziiratul Carab ayaa soo saartay Filim cusub kaasi oo lagu soo bandhigay Jawaasiis la shaqeynayay sirdoonka Saliibiyadda Mareykanka.
Filimkan oo la daawan karo muddo 36 daqiiqo ah kuna baxayo luqadaha Carabiga iyo Ingilishka ayeey Mu’asasada Al-malaaxim kusoo bandhigtay Jawaasiis u shaqeynayay sirdoonka Saliibiyadda Mareykanka kuwaasi oo sidoo kale ka dambeeyay duqeman lagu dilay Rag badan oo Mujaahidiin ah.
Jawaasista filimkan lagu soo bandhigay ayaa gaaraya ilaa shan Jawaasiis kuwaasi oo iyagoo ku dhex jira safka Mujaahidiinta la shaqeynayay jawaasiisna u ahaa sirdoonka Saliibiyadda Mareykanka.
Jawaasiistan waxaa ku jira midkii ka dambeeyay duqeyntii lagu dilay Munashidkii Mujaahidka ahaa Abuu Haajir Alxadrami sidoo kale filimkan waxaa lagu soo bandhiyaaa oo lagu fashilinayaa qaabka ay u shaqeystaan jawaasiista iyo sirdoonka Mareykanka.
Halkan Ka Eeg Filimka.
2,679 total views, 12 views today
MAXAMED Adan Xasan bullaale
Allahu akbar walaal adkaysta in yar ba dhimane insha allahu gaallona walahi way jabtay iidanka alle allahu akbar